Jereo ny tombony azo amin'ny fampiasana serum volo | Bezzia
Maninona ianao no tokony mampiasa serum volo
Susana Garcia | 03/04/2021 20:00 | beauty, Vokatra hatsaran-tarehy
Tsy maninona na lava ny volonao, lava, fohy, olioly, mahitsy, volontsôkôlà, volontsôkôla na blonda, satria ny zava-dehibe matetika amin'ny farany dia ny fahasalamanao sy ny fikolokoloana ny volo, zavatra iray izay tsy tratra mora. Hanome anao izahay firy ny hevitra hianarana mampiasa serum volo. Toy ny fikarakarantsika ny tarehintsika dia ilaina koa ny mitandrina ny fahasalaman'ny volo. Ilaina ny mampihatra ireo vokatra ilaina amin'izany.
Hiresaka momba izany isika maninona ianao no tokony mampiasa serum volo ary ny tombony azo avy amin'izany. Ny serum dia vokatra hitantsika ihany koa ho an'ny tarehy ary misy akora mavitrika mifantoka amin'ny fikarakarana lalina ny volo, mihetsika amin'ny toerana ilaina, satria misy karazana serum maro.
1 Fa inona izany
2 Fomba fampiharana ny serum
3 Serum ho an'ny volo rehetra
Fa inona izany
El Ny serum volo dia vokatra mahomby hikarakarana fatratra ny volo izay simba kokoa na mila fikarakarana fanampiny, mihoatra ny zavatra omentsika isan'andro. Amin'ireto vokatra ireto, mazàna dia misy fatrany akora mavitrika be izay manampy amin'ny fanamboarana ny fahasimbana amam-bolana ao amin'ny volo, noho izany matetika dia kosmetika lafo kokoa. Na dia marina ihany koa fa ny serum dia ampiharina indraindray, mba hanatanterahana fitsaboana volo. Afaka mahita serum mifanaraka amin'ny filàna samihafa ianao, fa ny tena marina dia ireo karazana vokatra ireo amin'ny ankapobeny dia mifantoka amin'ny fanomezana volo ny famirapiratana, ny famehezana ny cuticle, ny fitrandrahana azy ary ny fikolokoloana ny loha.
Fomba fampiharana ny serum
El serum volo dia matetika ampiharina amin'ny habetsany kelySatria vokatra mifantoka io dia tsy tokony hampiasa be loatra isika. Toy izany koa ny serum tarehy. Miaraka amina rano kely vitsivitsy dia afangaro amin'ny volo maina na mando, arakaraka ny vokatra tadiavina. Apetaka amin'ny faran'ny izy ary miakatra izy io. Raha ny mahazatra dia azo apetaka amin'ny hodi-doha sy faka koa io. Na izany na tsy izany dia tsy maintsy mamaky ny torolalan'ny mpanamboatra foana isika hahalalana ny fampiasana marina azy sy ny fomba fizarana azy.
Serum ho an'ny volo rehetra
Androany dia mahita zavatra maro azo atao amin'ny resaka kosmetika isika. Ny iray amin'izy ireo dia ny fahitantsika karazana maro vokatra volo amin'ny lohahevitry ny serum. Ny iray amin'ireo novidiana tato ho ato dia ilay mifantoka amin'ny fikolokoloana ny volo amin'ny alàlan'ny fametahana hafanana, ary koa ny fisorohana ny friz. Ireo karazana serum ireo dia matetika ampiharina isaky ny manasa volo mba tsy ho simba ny volo amin'ny alàlan'ny fanaovana fitaovana hafanana toy ny vy na fanamainana. Ny volo dia voaro amin'ny kodiarana mihidy, mamiratra ary tsy misy sisiny misaraka. Serum iray miaro sy misoroka ny fahasimban'ny volo.
El ny volo olioly dia karazana volo hafa tokony hitadiavanao serum mety amin'ny toetrany. Misy ny sasany izay afaka manampy amin'ny fitazonana ny curl sy hydrate. Matetika dia maina kokoa io volo io ary very mamirapiratra, ankoatry ny fikororohana mora kokoa, noho izany ny serum dia mety ho fanampiny tsara hanomezana azy hidina fanampiny indraindray mba hitazomana sy hamandoana ny volo. Frizz dia iray amin'ireo fahavalo lehibe amin'ity karazana volo ity.
El serum mba hidradradradra dia iray amin'ireo tena tadiavina indrindra. Raha ny mahazatra, raha mitady serum manara-penitra isika, dia ny mandena tanteraka ny karazan-volo rehetra. Misy serum mety ho hita amin'ny vidiny mirary tokoa ary manampy antsika hanome hydration fanampiny amin'ny volo. Ny olan'ny fiafarana maina dia zavatra saika mitranga matetika ary ny serum dia afaka manampy amin'ny famaranana izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » beauty » Maninona ianao no tokony mampiasa serum volo
Macaroni misy saosy fromazy epinara
Fanazaran-tena mahasoa ho an'ny osteoarthritis